Tablets (iOS/Androids) နှင့်အသုံြး့ပုသူများ အတွက် App တွင်ပှါင်သော အရာများ မှာ:
ရှေ့စာမျက်နာ တွင်: အော်ဒါယူခြင်း, ငေရွှင်းခြင်း, စားပွဲပြောင်းခြင်း, အော်ဒါများ ပေါင်းခြင်း,အစီရင်ခံစာ များ ရွေ့ခြင်း.
နောက်စာမျက်နာ တွင်: အစားအသောက် စာရင်းများထည့်သွင်းပေးထားခြင်း.
အစိရင်ခံစာ: ရောင်းချအား အသေးစိတ်ကို ခွဲခြမ်းပြီး ဇယားဖြင့်ဖော်ပြခြင်း.
အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများ: Tablet, Phone.
စားသုံးသူ(များ): အကန့်အသတ်မရှိ .
ဆိုင်ှန်ထမ်းများ အတွက်:
ရှေ့ဘက်စာမျက်နှာတွင်: အော်ဒါယူခြင်း, ငေရွှင်းခြင်း, စားပွဲပြောင်းခြင်း, အော်ဒါများ ပေါင်းခြင်း,အစီရင်ခံစာ များ ရွေ့ခြင်း,ှန်ဆောင်မှုပေးခြင်း, မဖိေို ချာင်အတွင်း စနစ်(KDS),စားစရာသွားပို့ခြင်း/သွားပို့ ရန်, ရှင်းငွေများ ခွေဲပးခြင်း
နောက်စာမျက်နှာတွင်: အစားအသောက် စာရင်းများထည့်သွင်းပေးထားခြင်း,ှန်ထမ်းစီမံခန့်ခြွဲခင်း,ပစ္စည်း စာရင်း.
အစိရင်ခံစာ: စာရင်းဇယားများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဇယား ဿှ ခု, အသေးစိတ် အရောင်းအား နှင့်ပတ်သတ်သောအစိရင်ခံစှာ၇ခု, စားသုံးသူ အရေအတွက် အချိန်/ပစ္စည်း.
အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများ: Web-server, PC, POS, Tablet, Phone, Smart TV.
ရှေ့ဘက်စာမျက်နှာတွင်: အော်ဒါယူခြင်း, ငေရွှင်းခြင်း, စားပွဲပြောင်းခြင်း, အော်ဒါများ ပေါင်းခြင်း,အစီရင်ခံစာ များ ရွေ့ခြင်း,ှန်ဆောင်မှုပေးခြင်း, မဖိေို ချာင်အတွင်း စနစ်(KDS),စားစရာသွားပို့ခြင်း/သွားပို့ ရန်, ရှင်းငွေများ ခွေဲပးခြင်း.
နောက်စာမျက်နှာတွင်: အစားအသောက် စာရင်းများပြုပြင်နိုင်ခြင်း, အလုပ်သမား စီမံခန့်ခွဲခြင်း, သိုလှောင်ရုံ စီမံခန့်ခွဲခြင်း, ပစ္စည်ှးယ်စာရင်း စီမံခန့်ခွဲခြင်း, တှာန်များ ခွှဲေပေးခြင်း, စားသုံးသူများ ကို စနစ်တကျ စီစဉ်ပေးခြင်း, နှင့် အရောင်းမြှင့်တင် ခြင်း ပုံစံ.
အစိရင်ခံစာ: စာရင်းဇယားများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဇယား ဿှ ခု, အသေးစိတ် အရောင်းအား နှင့်ပတ်သတ်သောအစိရင်ခံ၃ှခု, စားသုံးသူ အရေအတွက် အချိန်/ပစ္စည်း.
အစိရင်ခံစာ: စာရင်းဇယားများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဇယား ဿဿ ခု, အသေးစိတ် အရောင်းအား နှင့်ပတ်သတ်သောအစိရင်ခံ၃ှခု, စားသုံးသူ အရေအတွက် အချိန်/ပစ္စည်း.
Restaurant chain management.
စားသောက်ဆိုင်နှင့် ဆက်စပ် လုပ်ငန်းများ အတွက 90.000 Kyat/လ/Outlet
လုပ်ငန်းဖော် ဆောင်ခြင်း အတွက် ကျသင့်ငွေ: 200.000 Kyat/စားသောက် ဆိုင် တခုခြင်းစီ အတွက် ကိုယ်ပိုင်နာ မည်
အဆိုပါအခမဲ့အစမ်းဗားရှင်းကို အသုံးပြုပြီးနောက် စားသောက်ဆိုင်မှ တရာှးင်လုပ်ငန်းကိုဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် MISA သို့ တကြိမ်ပေး ငွေချေမှုကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။(ထိုငွေပေးချေမှု သည် အသေးစား အလတ်စား အကြီးစား လုပ်ငန်း အားလုံးနှင့် အကျုံှးင်သည်။)
အလုပ်ထဲတွင် လက်တွေသင် ကြားပေြး ခင်း ၁
150.000 Kyat သင်တန်း ဆင်းသူအ ရေအတွ က်
ရန်ကုန်မြို့တငွ်း ရှိ စားသောက်ဆိုင်များ အတွက် စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုလျှင် တစ်ရက် စီ သင်တန်းပေးခြင်း
သင်တန်းသားများသည် ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပ မှ ဖြစ်ပါက အပိုကြေးများ ထပ်မံပေးသွင်းရမယ်: သင်တန်းဆရာများ အတက်ွခရီး စရိတ်နှင် တည်းခိုစရိတ် စသည့်
After sale service per request
25.000 Kyat Time/Outlet
If the restaurant requests on-site customer service for technique and software issues will have to pay extra fees.